Kenya oo lagu eedeeyay in ay wado faragalinta Soomaaliya kadib... | Universal Somali TV
Kenya oo lagu eedeeyay in ay wado faragalinta Soomaaliya kadib heshiiskii Farmaajo iyo Uhuru
Dowlada Kenya ayaa u muuqata in ay sii wado cadaadis ka dhan xukuumada dhexe ee dalka taasi oo la xiriirta muranka ay ku sheeganeyso badda Soomaaliya oo hada u muuqda mid ay ka rajo Beeshay.
Wafdi ka soo duulay madaarka diyaaradaha magaalada caasimada ah ee Nairobi oo u badan xildhibaano ka tirsan labada gole ee dowlada kana soo jeeda Jubbooyinka iyo siyaasiyiin xil ka soo qabtay xukuumadihii dalka soo maray ayaa ka dagay maanta magaalada Kismaayo.
Hadaba arintaan ayaa waxaa ka weydiinay mid ka mid dhalinyarada Soomaaliyeed ee bartay cilmiga siyaasada oo lagu magacaabo Cabdixamiid Aadan Axmed, waxaana uu tilmaamay in arintaan ay tahay mid xukuumada Nairobi ay dooneyso in cadaadis ay ku saarto Dowlada.
Mr Cabdixamiid ayaa intaa ku daray in Kenya ay ku fashilantay dooda badda isaga oo tusaale u soo qaatay warbixinada ay warbaahinta gudaha dalkaasi ka qorayaan iyo codsi labaad oo Kenya gudbisay si mudo sanad ah dib loogu dhigo dhageysiga dacwada Badda.
Aqoonyahankaan soomaaliyeed ayaa dhanka kale tilmaamay in Kenya ay isku dayi doonto in ay sameyso siyaasiyiin iyada gacan saar la leh kana hor yimaada xukuumada soomaaliya isaga oo si gooni ah u soo qaatay maamulka Jubbaland.
Dabayaaqadii bishii hore ayay aheyd markii madaxweynaha masar uu heshiis kala dhex dhigay madaxweynaha dalka Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo dhigiisa Kenya Uhuru Kenyatta.
Kulankaan oo dhacay intii uu socday shir madaxeedkii 74-aad ee qaramada midoobay ee ka dhacay magaalada New Yor ee dalka Mareykanka ayaa labada dhinac lagu qanciyay in si caadi ah uu ku soo noqdo xiriirkii ka dhaxeeyay bilowgii Sanadkaan.
Uhuru Kenyatta oo fursad u arkayay isgacan qaadka Farmaajo ayaa ku baaqay in wadahadal lagu dhameeyo muran ka ay kenya ku sheeganeyso badda, balse madaxweyne Farmaajo ayaa taa gaashaanka u daruuray waxaana uu sheegay in dowlada iyo shacabka soomaaliyeed ay ku qanacsan yihiin in lagu kala baxo maxkamada cadaalada ee ICJ.
Si kastaba ha ahaatee talaabadii maanta ay dowlada Kenya ku ogolaatay in diyaaradii waday wafdiga gaaray magaalada Kismaayo ayaa ceel ku sii ridaya heshiiskii lagu gaaray Mareykanka.
Kan-xigaWasiirka Amniga Jubbaland Cabdirashii...
Kan-horeHogaamiyaha ugu weyn mucaaradka Camer...
59,412,713 unique visits